Saraakiil ciidan oo ka tirsan dawlada Federalka ayaa ka hadlay dagaal ka dhacay Jubadda Hoose. – Radio Daljir
Seteembar 1, 2012 1:33 g 0
Kismaanyo-1-Sep-2012-Saraakiisha ciidamada Dawlada ee gobolka Jubadda Hoose ayaa sheegay in shalay weerar gaadmo ah ay kusoo qaadeen ciidamo katirsan Al-shabaab kuwaasoo ay tilmaameen in dhankooda uu soo gaarey khasaare dhan 2 dhimasho ah iyo 4 dhaawac ah.
Taliyaha ciidamada Dawlada ee Jubooyinka iyo Gedo Col Maxamed Cabdi Xasan ayaa Radio Daljir u sheegay in khasaraha Al-shabaab soo gaarey ka badan yahay kan soo gaarey ciidanka dawlada.
Sidoo kale Taliyaha wuxuu beeniyey maydad ay baraha Internet ka soo dhigeen Al-shabaab kuwaasoo ay ku sheegeen inay yihiin askar isugu jirta kuwa dawlada iyo kuwa Kenya.
“Walaaloow taasi waxay kamid tahay waxyaabaha ay iskaga hadlaan sida diyaaradaan soo ridney iyo gaadiid dagaal baan gubney, marka anaga khasaarahayagu waa laba dhimasho ah iyo afar dhaawac ah, wax kale oo nasoo gaareyna majiraan” ?Col Maxamed Cabdi Xasan.
Gobolka Jubadda Hoose waxaa xiligan ka taagan xiisad dagaal oo xoogan taasoo u dhaxaysa ciidamada Dawlada KMG ah oo garabsanaya kuwa Kenya ee ku hawlgalaya magaca Amisom iyo ururka Al-shabaab oo kasoo horjeeda.